There Will Be Blood (2007) | MM Movie Store
အခြိနျကာလက ၁၈၉၈ ခုနှဈ။ နယူးမက်ကစီကိုရဲ့ကှငျးပွငျတှအေလညျက မိုငျးတှငျးတှထေဲမှာ ငှသေတ်တုရှာဖှနေသေူ တဈယောကျကို တှရေ့တယျ။ ဇှဲနဲ့မာနျနဲ့တူးနတေဲ့သူ့ရဲ့ လုံ့လအတှကျ အဖိုးအခအနနေဲ့ငှသေတ်တုရိုငျးတဈခဲကိုလညျး တှထေ့ားပွီးပွီ။ သူ့အလုပျပွီးပွီဆိုတော့ တှငျးပျေါပွနျတကျဖို့ လုပျတာပေါ့။
ဒါပမေဲ့မတျောတဆမှုတဈခုဖွဈပွီး သူ့ဘယျခွထေောကျကဆာသှားခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ မွပွေငျပျေါကိုတော့သူရအောငျပွနျတကျနိုငျခဲ့တယျ။ သူ့နာမညျက‘ဒနျနီယယျ ပလိနျးဗြူး’ တဲ့။နှဈဆယျရာစုအစောပိုငျးကာလတှမှော လူမှုဘဝတှရေဲ့တိုးတကျဖှံ့ဖွိုးမှုအရ လောငျစာဟာ ရတနာပစ်စညျးတှထေကျပိုတနျဖိုးရှိလာတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး ရနေံထှကျမယျလို့ယူဆကွတဲ့မွပေျေါမှာ လူသားတှဟော ခွခေငျြးလိမျလာကွတယျ။ တဈကယျတော့ ရနေံတူးဖျောမှုလုပျငနျးကအန်တရာယျမြားတဲ့အလုပျမြိုး။ အဲ့ဒီခတျေကာလအနနေဲ့ဆိုပိုဆိုးတာပေါ့။မွအေောကျအလှာထဲက အနကျရောငျရှရေညျတှကေို မွပွေငျပျေါတငျဖို့ဆိုတာ အန်တရာယျမြားသလိုစိနျချေါမှုတှလေညျး ပွညျ့နှကျနတေယျ။
ယနခေ့တျေလိုခတျေမှီတူးဖျောကိရိယာတှေ မရှိတဲ့အတှကျ လူအားကာယအားကိုသာ အသုံးခပြွီး မွအေောကျ ပအေတျောကှာတဲ့တှငျးထဲ ရှူစရာ လလေုံလုံလောကျလောကျမရှိ၊ ဓာတျငှနေံ့တှေ လှမျးနတေဲ့ကွားထဲမှာ တူးဖျောကွရတယျ။
ဒါတောငျလုပျငနျးခှငျအန်တရာယျတှဖွေဈတဲ့ တှငျးပွိုကမြှုတှေ၊ဝနျမနိုငျပဲ ပကျြစီးရာကနေ လူထိခိုကျမှုတှေ မပါသေးဘူး။ဒါပဲလား၊ ဘယျဟုတျလိမျ့မလဲ။ ရနေံတူးအလုပျသမားတှရေဲ့ ကိုယျကာယကွံ့ခိုငျမှုတှေ စိတျဓာတျကွံ့ခိုငျမှု။ဒါတှမေပွညျ့စုံလို့လဲ မရပွနျဘူး။
အသကျနဲ့ရငျးမှငှပွေနျရမဲ့ အလုပျမြိုး။‘ဒနျနီယယျ’ ကို ခတျေဆိုးကွားမှာ လူလာဖွဈတယျလို့သတျမှတျရမယျ။ ကိုယျကောငျးစားဖို့ သူတဈပါးကိုခနြငျးကွတဲ့ ခတျေကာလမြိုးမှာ ကငျြလညျလာရတဲ့သူ့အဖို့တော့ အရာရာကို မုနျးတီးစိတျနဲ့ပဲ ကွညျ့တတျနပွေီ။
သူ့ရဲ့ စိတျနှလုံးတဈခုလုံးဟာလညျး အနိုငျရလိုစိတျသံသယစိတျတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနတေယျ။ ကိုယျ့အပျေါတဈခါကြူးရငျ ဆယျခါပွနျကြူးပွတတျတဲ့ လူစားမြိုး။ကိုယျ့ကိုလကျသီးနဲ့တဈခါထိုးရငျ ဓားနဲ့ပါပွနျထိုးမယျဆိုတဲ့စိတျဓာတျပိုငျရှငျမြိုး။ တဈကယျခကျထနျတဲ့ လူစားမြိုးဖွဈနပွေီ။
ဒါကွောငျ့ တူးလို့ရလာခဲ့တဲ့ ငှသေတ်တုခဲကို အရငျးပွုပွီး‘ဒနျနီယယျ’ တဈယောကျ ရနေံတူးဖျောရေးလုပျငနျးကိုစတငျခဲ့တယျ။ တဈရကျတော့ သူနဲ့လုပျငနျးတူမိတျဆှတေဈယောကျဟာ လုပျငနျးခှငျမတျောတဆမှုတဈခုမှာ ဆုံးပါးသှားခဲ့တယျ။
သားကလေးတဈယောကျကနျြခဲ့တာကွောငျ့ ‘ဒနျနီယယျ’ က သညျကောငျလေးကိုမှေးစားခဲ့တယျ။ အရှယျရောကျလာတော့လညျးသူ့လို ရနေံကို ခဈြတတျအောငျ သငျပေးနိုငျခဲ့တယျ။နှဈကာလတှေ ကွာလာတာနဲ့အမြှ ‘ဒနျနီယယျ’ ရဲ့လုပျငနျးက တဈစထကျတဈစ အောငျမွငျလာပွီ။
ဒီလိုနဲ့တဈခုသော ကာလအရောကျမှာ ရနေံသမားတိုငျးမကျြစိကလြောကျတဲ့ နယျမွသေဈတဈခုကို သတိထားလိုကျမိခြိနျကစပွီး ‘ဒနျနီယယျ’ ဟာ လူသားဆနျစိတျတှပေါ ပြောကျဆုံး၊ ပွိုငျဘကျတှအေပျေါပရိယာယျတှသေုံးပွီး သှေးအေးအေးနဲ့ ဖယျရှားတတျတဲ့ လူကွမျးကွီးတဈယောကျ ဖွဈလာတော့တယျ…။
——————————————————————-၁၉၂၆ ခုနှဈက စာရေးဆရာ Upton Sinclair ရဲ့ကမ်ဘာကြျော Oil! ကို အခွခေံပွီး ရိုကျကူးထားတဲ့Western Style ဇာတျကားမြိုးဖွဈတဲ့ There WillBe Blood ဟာ ၂၁ ရာစုရဲ့ အကောငျးဆုံးသောရုပျရှငျဇာတျကားတှထေဲက တဈကားဖွဈပွီး
ရိုကျကူးသူကတော့ Magnolia, The Master ဒီလိုဇာတျကားတှရေဲ့ ပဲ့ကိုငျရှငျ လကျရှိ ဟောလိဝုဒျ ရုပျရှငျလောကရဲ့အကောငျးဆုံးဒါရိုကျတာတှထေဲက တဈယောကျဖွဈတဲ့Paul Thomas Anderson ပဲ။Cinematography ပိုငျးကိုတော့ ထှထှေထေူးထူး ပွောစရာဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။
ရနေံစငျမီးလောငျတဲ့ပွကှကျနဲ့တငျ အျောစကာဆုရခဲ့တာ တနျသှားပါပွီ။ ဒီလို ရိုကျခကျြတှကေပဲကြှနျတျောတို့ကို ရနေံမွထေဲ ချေါဆောငျသှားပွီးရနေံစိမျးအနံ့တှေ ရစခေဲ့တာပါ။Western Style ဆိုပမေဲ့ မွငျနကေဖြွဈတဲ့ကောငျးဘှိုငျတှေ၊ သူရဲကောငျးတှကေို မတှမေ့မွငျခဲ့ရပဲ ရကျစကျတတျတဲ့ လူမဆနျတဲ့ရနေံလုပျငနျးရှငျတဈဦးကိုပဲ မွငျခဲ့ရတယျ။
ရကျစကျတတျတဲ့ ဉာဏျနီဉာဏျနကျမြားတဲ့ ပိုကျဆံကိုကိုးကှယျတဲ့ ဒီဇာတျကောငျကို အသကျသှငျးပွလိုကျသူကတော့ သကျရှိထငျရှား ရှိနသေေးတဲ့ သရုပျဆောငျတှထေဲ အကောငျးဆုံးလို့ သတျမှတျရမဲ့ Sir DanielDay-Lewis ပါပဲ။
အပွငျလောကမှာ ယဉျကြေးရညျမှနျသူ၊ ရိုကျကှငျးပျေါရောကျတာနဲ့ တခွားလူတဈယောကျအဖွဈ ပွောငျးလဲသှားတတျတဲ့ DanielDay-Lewis အတှကျ Daniel Plainview ဟာဒုတိယမွောကျ အျောစကာကို ယူဆောငျပေးခဲ့သလိုသူ့ရဲ့ သရုပျဆောငျသကျတမျးတဈလြှောကျမှာအကောငျးဆုံးသော သရုပျဆောငျခကျြအဖွဈလညျးသတျမှတျခံခဲ့ရတယျ။
Daniel Day-Lewis ဟာ Method Actorတဈယောကျ ဖွဈတဲ့အတှကျ ရိုကျကူးရေးပွီးပမေဲ့လညျးဇာတျကောငျစရိုကျအတိုငျးနတေတျတာကွောငျ့Daniel Plainview ကို Eli ကွောကျတာထကျDaniel Plainview ကို Eli သရုပျဆောငျPaul Dano ကွောကျတာက ပိုမယျလို့လညျးကြှနျတျောယူဆမိတယျ။
ဒီလိုဇာတျလမျးမြိုးနဲ့ ဇာတျကောငျမြိုးကို ပုံဖျောပေးခဲ့တဲ့Director Paul Thomas Anderson နဲ့သရုပျဆောငျကွီး Daniel Day-Lewis ကွောငျ့ပဲသှေးနံ့နဲ့ ရနေံစိမျးနံ့တှေ ရောနှောလှငျ့ပြံ့နတေဲ့ ရနေံမွကေရကျစကျကွမျးကွုတျတဲ့ လူကွမျးကွီးတဈယောကျကိုကြှနျတျောတို့ မမေ့ရနိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
အချိန်ကာလက ၁၈၉၈ ခုနှစ်။ နယူးမက္ကစီကိုရဲ့ကွင်းပြင်တွေအလည်က မိုင်းတွင်းတွေထဲမှာ ငွေသတ္တုရှာဖွေနေသူ တစ်ယောက်ကို တွေ့ရတယ်။ ဇွဲနဲ့မာန်နဲ့တူးနေတဲ့သူ့ရဲ့ လုံ့လအတွက် အဖိုးအခအနေနဲ့ငွေသတ္တုရိုင်းတစ်ခဲကိုလည်း တွေ့ထားပြီးပြီ။ သူ့အလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ တွင်းပေါ်ပြန်တက်ဖို့ လုပ်တာပေါ့။
ဒါပေမဲ့မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး သူ့ဘယ်ခြေထောက်ကဆာသွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မြေပြင်ပေါ်ကိုတော့သူရအောင်ပြန်တက်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူ့နာမည်က‘ဒန်နီယယ် ပလိန်းဗျူး’ တဲ့။နှစ်ဆယ်ရာစုအစောပိုင်းကာလတွေမှာ လူမှုဘဝတွေရဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအရ လောင်စာဟာ ရတနာပစ္စည်းတွေထက်ပိုတန်ဖိုးရှိလာတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ရေနံထွက်မယ်လို့ယူဆကြတဲ့မြေပေါ်မှာ လူသားတွေဟာ ခြေချင်းလိမ်လာကြတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ရေနံတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းကအန္တရာယ်များတဲ့အလုပ်မျိုး။ အဲ့ဒီခေတ်ကာလအနေနဲ့ဆိုပိုဆိုးတာပေါ့။မြေအောက်အလွှာထဲက အနက်ရောင်ရွှေရည်တွေကို မြေပြင်ပေါ်တင်ဖို့ဆိုတာ အန္တရာယ်များသလိုစိန်ခေါ်မှုတွေလည်း ပြည့်နှက်နေတယ်။
ယနေ့ခေတ်လိုခေတ်မှီတူးဖော်ကိရိယာတွေ မရှိတဲ့အတွက် လူအားကာယအားကိုသာ အသုံးချပြီး မြေအောက် ပေအတော်ကွာတဲ့တွင်းထဲ ရှူစရာ လေလုံလုံလောက်လောက်မရှိ၊ ဓာတ်ငွေ့နံ့တွေ လွှမ်းနေတဲ့ကြားထဲမှာ တူးဖော်ကြရတယ်။
ဒါတောင်လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်တွေဖြစ်တဲ့ တွင်းပြိုကျမှုတွေ၊ဝန်မနိုင်ပဲ ပျက်စီးရာကနေ လူထိခိုက်မှုတွေ မပါသေးဘူး။ဒါပဲလား၊ ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲ။ ရေနံတူးအလုပ်သမားတွေရဲ့ ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုတွေ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှု။ဒါတွေမပြည့်စုံလို့လဲ မရပြန်ဘူး။
အသက်နဲ့ရင်းမှငွေပြန်ရမဲ့ အလုပ်မျိုး။‘ဒန်နီယယ်’ ကို ခေတ်ဆိုးကြားမှာ လူလာဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ရမယ်။ ကိုယ်ကောင်းစားဖို့ သူတစ်ပါးကိုချနင်းကြတဲ့ ခေတ်ကာလမျိုးမှာ ကျင်လည်လာရတဲ့သူ့အဖို့တော့ အရာရာကို မုန်းတီးစိတ်နဲ့ပဲ ကြည့်တတ်နေပြီ။
သူ့ရဲ့ စိတ်နှလုံးတစ်ခုလုံးဟာလည်း အနိုင်ရလိုစိတ်သံသယစိတ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်တစ်ခါကျူးရင် ဆယ်ခါပြန်ကျူးပြတတ်တဲ့ လူစားမျိုး။ကိုယ့်ကိုလက်သီးနဲ့တစ်ခါထိုးရင် ဓားနဲ့ပါပြန်ထိုးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်မျိုး။ တစ်ကယ်ခက်ထန်တဲ့ လူစားမျိုးဖြစ်နေပြီ။
ဒါကြောင့် တူးလို့ရလာခဲ့တဲ့ ငွေသတ္တုခဲကို အရင်းပြုပြီး‘ဒန်နီယယ်’ တစ်ယောက် ရေနံတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့တယ်။ တစ်ရက်တော့ သူနဲ့လုပ်ငန်းတူမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဟာ လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆမှုတစ်ခုမှာ ဆုံးပါးသွားခဲ့တယ်။
သားကလေးတစ်ယောက်ကျန်ခဲ့တာကြောင့် ‘ဒန်နီယယ်’ က သည်ကောင်လေးကိုမွေးစားခဲ့တယ်။ အရွယ်ရောက်လာတော့လည်းသူ့လို ရေနံကို ချစ်တတ်အောင် သင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။နှစ်ကာလတွေ ကြာလာတာနဲ့အမျှ ‘ဒန်နီယယ်’ ရဲ့လုပ်ငန်းက တစ်စထက်တစ်စ အောင်မြင်လာပြီ။
ဒီလိုနဲ့တစ်ခုသော ကာလအရောက်မှာ ရေနံသမားတိုင်းမျက်စိကျလောက်တဲ့ နယ်မြေသစ်တစ်ခုကို သတိထားလိုက်မိချိန်ကစပြီး ‘ဒန်နီယယ်’ ဟာ လူသားဆန်စိတ်တွေပါ ပျောက်ဆုံး၊ ပြိုင်ဘက်တွေအပေါ်ပရိယာယ်တွေသုံးပြီး သွေးအေးအေးနဲ့ ဖယ်ရှားတတ်တဲ့ လူကြမ်းကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာတော့တယ်…။
——————————————————————-၁၉၂၆ ခုနှစ်က စာရေးဆရာ Upton Sinclair ရဲ့ကမ္ဘာကျော် Oil! ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့Western Style ဇာတ်ကားမျိုးဖြစ်တဲ့ There WillBe Blood ဟာ ၂၁ ရာစုရဲ့ အကောင်းဆုံးသောရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲက တစ်ကားဖြစ်ပြီး
ရိုက်ကူးသူကတော့ Magnolia, The Master ဒီလိုဇာတ်ကားတွေရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် လက်ရှိ ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်လောကရဲ့အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့Paul Thomas Anderson ပဲ။Cinematography ပိုင်းကိုတော့ ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။
ရေနံစင်မီးလောင်တဲ့ပြကွက်နဲ့တင် အော်စကာဆုရခဲ့တာ တန်သွားပါပြီ။ ဒီလို ရိုက်ချက်တွေကပဲကျွန်တော်တို့ကို ရေနံမြေထဲ ခေါ်ဆောင်သွားပြီးရေနံစိမ်းအနံ့တွေ ရစေခဲ့တာပါ။Western Style ဆိုပေမဲ့ မြင်နေကျဖြစ်တဲ့ကောင်းဘွိုင်တွေ၊ သူရဲကောင်းတွေကို မတွေ့မမြင်ခဲ့ရပဲ ရက်စက်တတ်တဲ့ လူမဆန်တဲ့ရေနံလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကိုပဲ မြင်ခဲ့ရတယ်။
ရက်စက်တတ်တဲ့ ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်များတဲ့ ပိုက်ဆံကိုကိုးကွယ်တဲ့ ဒီဇာတ်ကောင်ကို အသက်သွင်းပြလိုက်သူကတော့ သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေသေးတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေထဲ အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ရမဲ့ Sir DanielDay-Lewis ပါပဲ။
အပြင်လောကမှာ ယဉ်ကျေးရည်မွန်သူ၊ ရိုက်ကွင်းပေါ်ရောက်တာနဲ့ တခြားလူတစ်ယောက်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့ DanielDay-Lewis အတွက် Daniel Plainview ဟာဒုတိယမြောက် အော်စကာကို ယူဆောင်ပေးခဲ့သလိုသူ့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာအကောင်းဆုံးသော သရုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ်လည်းသတ်မှတ်ခံခဲ့ရတယ်။
Daniel Day-Lewis ဟာ Method Actorတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အတွက် ရိုက်ကူးရေးပြီးပေမဲ့လည်းဇာတ်ကောင်စရိုက်အတိုင်းနေတတ်တာကြောင့်Daniel Plainview ကို Eli ကြောက်တာထက်Daniel Plainview ကို Eli သရုပ်ဆောင်Paul Dano ကြောက်တာက ပိုမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆမိတယ်။
ဒီလိုဇာတ်လမ်းမျိုးနဲ့ ဇာတ်ကောင်မျိုးကို ပုံဖော်ပေးခဲ့တဲ့Director Paul Thomas Anderson နဲ့သရုပ်ဆောင်ကြီး Daniel Day-Lewis ကြောင့်ပဲသွေးနံ့နဲ့ ရေနံစိမ်းနံ့တွေ ရောနှောလွင့်ပျံ့နေတဲ့ ရေနံမြေကရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ လူကြမ်းကြီးတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ မေ့မရနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Stranger (Season 1) ၊ အပိုငျး (၆)